သင်၏ Android တွင်သီးသန့် Tegra Zone ဂိမ်းများကိုကစားပါ Androidsis
သင်၏ Android တွင်သီးသန့် Tegra Zone ဂိမ်းများကိုကစားပါ
el_iulius | | Android application များ, Android ဂိမ်းများ, NOTICIAS, လဲ tutorial
ငါအဆင်ပြေစေမယ့်ကိရိယာတစ်ခုအကြောင်းပြောမယ်။ Chainfire 3D app ဖြင့်သင်သည်သင်၏ Android တွင် Nvidia Tegra ပရိုဆက်ဆာဖြင့် terminal များအတွက်သီးသန့်ဂိမ်းများကိုရှုပ်ထွေးမှုများစွာမလုပ်နိုင်ပါ။
Chainfire 3D သည်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ဤ application အားလုံးကို run နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင် OpenGL drivers များကို configure လုပ်၍ အသုံးပြု၍ မကြာသေးမီအချိန်အထိ Nvidia chips အောက်တွင်သာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့လိုအပ်လိမ့်မယ် terminal ကိုအမြစ်တွယ်နေပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီခွင့်ပြုချက်မရှိပဲနဲ့ကြည့်လို့မရတဲ့ဖိုင်အချို့ကိုတည်းဖြတ်တော့မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့လည်းသတ္တိလိုတယ်၊ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာ run ။ သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသင်မသိရင်ဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းလိုသောသူများအတွက်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်အလုပ်လုပ်လိုပါကအောက်ပါအဆင့်များကိုသင့်အားပြောပြပါမည်။
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့် သင့်ဖုန်းအတွင်းရှိအချက်အလက်အားလုံးကိုအရန်ကူးခြင်း။ အကောင်းဆုံးကတော့ Titanium Backup ဖြင့် backup အချို့သည်ထိခိုက်မှုမရှိသော်လည်း Nandroid ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကို ကျနော်တို့လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ ဒီမှာစျေးကွက်က။ ဒီထက်ပိုရွေးစရာရှိသည့်ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်း
နောက်တစ်ဆင့်မှာပါလိမ့်မည် ပလပ်အင်အမြောက်အမြားကို download လုပ်ပါ ဂိမ်းများကိုသဟဇာတဖြစ်ဘို့ Chainfire ကတဆင့်သူတို့ကို load လုပ်ပါ။ သူတို့ဒီမှာရှိနေတယ်
ကျနော်တို့ rar rar unzip ငါတို့ကူးယူကူးယူပြီးပြီ libGLEMU_NVIDIA.zip (ဒီဇစ် unzipping မပါဘဲ) နှင့် ကျနော်တို့ SD ၏လမ်းညွှန်၌ထား၏။
Chainfire အစီအစဉ်အတွင်းတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည် CF3D Driver> ကိုရွေးပါ ပြီးတော့ SD ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ zip ကိုရှာတယ်။ ဖုန်းပြန်ဖွင့်တော့မယ်။
ပြန်လည်စတင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Chainfire သို့ပြန်သွားသည် Install plugin ကိုရွေးပါ နောက်ပိုင်းတွင် Nvidia option ကို။
ကျနော်တို့အဓိကမျက်နှာပြင်ကိုပြန်သွားနှင့် select လုပ်ပါ ပုံမှန် OpenGL Setting> Plugin> Nvidia ကိုသုံးပါ။
အခုရွေးစရာကိုရွေးရမယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Fix Nvidia ဂိမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်။
“ Tegra Zone” ကို install လုပ်တယ်။ အလုပ်လုပ်ပြီးပြီ
ငါသေး 100% ကစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ထိုအမှု၌မည်သူမဆိုသံသယ မင်းဖုန်းနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေအတွက်ငါရော၊ တီထွင်ဖန်တီးသူလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူး။
အခြေခံအားဖြင့်အောက်ပါဖုန်းများဖြစ်သည် 100% သဟဇာတ: HTC HD2, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy Tab, Samsung Epic 4G, Samsung Galaxy SII, Motorola Atrix, Motorola Droid 2, LG Optimus 2X နှင့် Nexus S. သို့သော် Nexus One သို့မဟုတ် Desire ဖြင့်အင်တာနက်ဗွီဒီယိုများကိုကစားသောဂိမ်းများကိုကစားသည်။ သော 1GHz ပရိုဆက်ဆာပါသည့် terminal ဖြင့်လုံလောက်သည်။ အရာအားလုံးစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်? ထိုအခါ တစ် ဦး N1 အပေါ်သရုပ်ပြဗီဒီယို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android တွင်သီးသန့် Tegra Zone ဂိမ်းများကိုကစားပါ
နောက်ဆုံးတစ်ခု ယခု၎င်းသည်အက်ပဲနှင့်ကွဲနေသည်။ ငါ€3အတွက် Tegra ဇုန်ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီ။ သူကရုပ်ရှင်သွားမှာပါ။ သင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်ရှင်းပြချက်သည်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ပထမ ဦး စွာ CF3 Driver ကိုရွေးပြီး install ကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းပြန်လည်စတင်ပါ။ ထို့နောက်ရွေးစရာများပိုမိုထွက်လာပြီးသင် install လုပ်ရန် plugin ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ဖော်ပြပြီးသော plugin အပါအဝင်ပရိုဂရမ်သည်ပလပ်အင်များကိုအလိုအလျောက်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးသင့်အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
စကားမစပ်။ Samsung Tab7on တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဒီပရိုဂရမ်အများအပြားလမ်းညွန်၌တည်ရှိ၏။ အခြားပရိုဆက်ဆာများနှင့်ပါ terminal များသည် Tegra ကိုအတုယူရန်သာမက၊ terminal အားလုံးသည်ပရိုဆက်ဆာအားလုံးကိုတုပရန်ဖြစ်သည်။ ကစားသည်)
Chainfire Pro ကိုထည့်သွင်းပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် Pro ဗားရှင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အား Fix Market ကိုမရွေးပါ။ မည်သူနှင့်ထပ်တူဖြစ်သနည်း။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အခြားနည်းလမ်းရှိပါသလား?
ငါနဲ့ထပ်တူထပ်တူဖြစ်တာပဲလိုတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်အဲဒါ tegra ရဲ့ contents ကိုငါမမြင်နိုင်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲသိတာလား။
အမှန်တရားကတော့ဒါဟာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ငါဆာမူရိုင်း Vengance နဲ့ Galaxy S မှာဂျက်နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပြပြီးပြrunningနာမရှိဘဲပြီးပြည့်စုံစွာပြေးနိုင်ခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ…။ နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ဖြေရှင်းချက်တွေရှာဖို့ကြိုးစားနေပြီးတဲ့နောက်ငါဟာရှေ့ကိုရွေ့မသွားဘူးဆိုတာသိတယ်။ ငါက၎င်းကိုဖွင့်ရန်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်သောအခါပြတင်းပေါက်အနည်းငယ်ပေါ်လာပြီး“ Chainfire3D ။ SuperUser acces ကို ဝယ်ယူ၍ မရပါ။ မင်းရဲ့စက်ကအမြစ်တွယ်နေလား။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကေဘယ်လ်တစ်ခုချပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆိုလိုတာကသင့်မှာ root access မရှိဘူး။ သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုအမြစ်တွယ်နေသောမည်သည့် application ကိုမဆိုသတိပေးရန်
ကောင်းတယ် ကောင်းပြီ၊ ငါ restart လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါရွေးစရာအသစ်တွေမရတော့ဘူး။ ငါ nvidia file ကို SD ရဲ့ root နေရာမှာထားရမယ်လို့ငါထင်သလား။ လေးစားပါတယ်
Galasetor၊ သင်၏ terminal ကို root လုပ်ရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရရန် htcmania, XDA သို့မဟုတ်အခြားအင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ဝင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Galaxy S GT i9000 သည်ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုပြောပါ။ ကျွန်ုပ်သည် nvidia အိုင်ကွန်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့နေရပါသည်။ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ၊ Chain တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများပါ ၀ င်သည့်ဖွဲ့စည်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ မည်သည့်အရာကစနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသည်ကိုသတိပြုမိပါသလား။ ဖန်သားပြင်များပိုမိုများပြားခြင်း၊ နောက်ကျခြင်း ... စသည်တို့ဆုံးရှုံးမှုများလား ငါ ADW launcher ကိုထည့်ပြီးပြီ။ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး၊ အမှန်တရားကတကယ်ကိုကောင်းနေပြီ၊ လူတိုင်းကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
က xperia ကစားအတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား? ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးငါက root ကိုဘယ်လိုမသိရပေမယ့်ငါ andriod မှအသစ်ဖြစ်၏, ငါ symbian နှင့်အတူအလွန်တက်ကြွခဲ့လျှင်မူကားငါ xke မြင်ကွင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပိုမိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသိပေမယ့်တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုသံသယဖြေရှင်းနိုင်လျှင်ကစားရန်အမြစ်ကိုဘယ်လိုရှာမတွေ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Disc ၂.၀: Android ၏ "BlackBerry Messenger"